Mogadishu Journal » 2021 » November » 25
Carrick ayaa si buuxda diirada u saaray Chelsea iyadoo Man Utd ay ku dhowdahay Rangnick
Michael Carrick ayaa ku adkeysanaya inuu si buuxda diirada u saarayo diyaarinta Manchester United kulanka axada ee Chelsea, iyadoo Red Devils lagu soo waramayo inay qarka u saaran tahay inay u magacawdo Ralf Rangnick. Sida ay sheegayaan wararku, 63-sano jirkaan ayaa lagu wadaa...
Thousands resume protests in Sudan days after the military signed a new power-sharing deal with the prime minister. A wounded Sudanese anti-coup protester is carried away by comrades during a demonstration in Omdurman, Sudan [AFP] Published On 26 Nov 2021 | Updated: 33 minutes...
Qorshaha Howlgalka Doorashada Golaha Shacabka oo lasoo saaray (Akhriso)
Guddiga Hirgalinta Doorashada ee Heer Federaal ayaa soo saaray qorshaha howlgalka doorashada golaha shacabka xili ay doorashada Xildhibaanada golaha Shacabka ka bilowdeen Muqdisho iyo Dhuusomareeb. Qorshahan ay soo bandhigeen guddiga doorashada ayaa lagu shaaciyay habraacyada ay...
Jawaari oo oo isaga soo tagay Baydhabo Shaacana ka qaaday waxyaabo badan uu la yaabay !
Gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Baydhabo ayaa halkaasi isaga soo tagay kadib markii laga hor joogsaday in uu tartamo. Jawaari oo goordhaw Muuqaal soo duubay ayaa...
Ku simaha Taliyaha NISA oo loo doortay Xildhibaan katirsan Golaha Shacabka (Sawirro)
Waxaa goordhaw magaalada Dhuusomareeb ee caasimada dowlad Goboleedka Galmudug ka dhacday doorashada kursiga sumadiisu tahay HOP067, waxaana kursigan ku tartamayay musharaxiin uu ku jiro taliyaha KMG ee Hay’adda NISA. Doorashada ka dhacday magaalada Dhuusomareeb oo horey loo sii...